၂၅ အောက်တိုဘာ ၁၈၅၄ (၁၈၅၄-၁၀-၂၅)
ဘယ်လကလားဗာ အနီး၊ ကရိုင်းမီးယန်းကျွန်းဆွယ်
44°30′N 33°36′E﻿ / ﻿44°30′N 33°36′E﻿ / ﻿44.500; 33.600
မာချယ် ကော်ရိုဘတ် ပဗယ် လီပရန်ဒီ
ဗြိတိသျှ ၂၀,၀၀၀၊ လက်နက် ၄၁ လက်
တူရကီ ၁,၀၀၀ ၂၅,၀၀၀
လက်နက် ၇၈ လက်
ဘယ်လကလားဗာတိုက်ပွဲ (အင်္ဂလိပ်: Battle of Balaclava) (၁၈၅၄ ခုနှစ်) သည် ကရိုင်းမီးယန်းစစ်ပွဲအတွင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းတိုက်ပွဲ အမှတ်တရ ဖြစ်ရသောအကြောင်းရင်းမှား စစ်အတွက် အရေးပါလှ၍ မဟုတ်ဘဲ၊ စစ်သည်တော်တစု၏ စစ်သားကောင်း ပီသမှုကို ပြသခဲ့သောအကြောင်းကြောင့်ပေတည်း။ ထိုတိုက်ပွဲသည် ၁၈၅၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ၇က်နေ့တွင် ဘယ်လလားဗာဆိပ်ကမ်းမြို့ကလေးအနီး၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ တူရကီတပ်များသည် ဘယ်ကလားဗာကို ခြေကုတ်စခန်းပြုကာ ဆီဗတ်စတိုပိုမြို့ကို ဝင်းရံလုပ်ကြံနေချိန်ဖြစ်၍၊ ရုရှတပ်များက မဟာမိတ်တပ်များကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လျက် ရှိသည်။ ရုရှားတပ်များသည် ဘယ်လကလားဗာမြို့အနီး တောင်ကုန်းတောင်တန်းများ၌ တပ်စွဲထားသော မဟာမိတ်တပ်များကို အလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သည်။ သို့သော် မဟာမိတ်တပ်များက ပြန်လှန်တွန်းလှန်သဖြင့် ဆုတ်ပြေးရသည်။ ယင်းသို့ ဆုတ်ပြေးရသော ရုရုတပ်များကို တပ်သားခြောက်ရာကျော် ပါဝင်သော အင်္ဂလိပ်မြင်းတပ် တတပ်က လိုက်တိုက်လေသည်။
ယင်းသို့ အင်္ဂလိပ်မြင်းတပ်သားများက ရုရှားတို့ကို လိုက်တိုက်ရာတွင် အထက်ကချမှတ်သော အမိန့်ကို ယင်းမြင်းတပ်အား ကွပ်ကဲသူ လော့လူကန်သည် အယူအဆလွဲသွားသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိ၏တပ်အား လက်ဝဲဘက်ရှိ ရုရှားအမြောက်တပ်ကို တိုက်ခိုက်ရမည့်အစား တောင်ကြားအဆုံးရှိ ရုရှအမြောက်တပ်ရှိရာသို့ ချီတပ်တိုက်ခိုက်စေသည်။ ထိုနေသို့ ရောက်ရန်မှာ အင်္ဂလိပ်မြင်းတပ်သားများအဖို့ သေမင်းခံတွင်းကို ဝင်ရာက်ရသည်နှင့် မခြားတော့ချေ။ အကြောင်းမူ မြင်းတပ်သားတို့ ဖြတ်ကျော်ရမည့် လမ်းကြောင်း၏ တဘက်တချက်တွင် ရုရှတပ်များ ရှိနေပြီးလျှင် ယင်းတို့ချီတက် တိုက်ခိုက်ရမည့် အမြောက်တပ်ကလည်း ရှေ့မှ ဆီးကြိုပစ်ခတ်နေမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မြင်းတပ်သားများသည် အမိန့်ပေးမှားသည်ကို သိကြသည်။ သို့ရာတွင် အမိန့်သည် အမိန့်ဖြစ်၍ စစ်သားကောင်းတို့မည်သည် အမိန့်ကို ပြန်လှန်ဆင်ခြေတပ်ခွင့်မရှိ။ အမိန့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့သည် သေမင်းခံတွင်း အတွင်းသို့ အပြင်းအထန် ချီတက်တိုက်ခိုက်ကြလေသည်။ တဖက်တချက် တောင်ကုန်းတောင်စောင်းများပေါ်မှ နေရာကောင်း ရထားသော ရုရှားတပ်များက၎င်း၊ အရှေ့မှ ရုရှားအမြောက်တပ်က၎င်း ယင်းတို့၏ ပစ်ကွင်းထဲသို့ တိုးဝင်လာသော အင်္ဂလိပ်မြင်းတပ်အား ကောင်းစွာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ပေရာ၊ ကျည်ဆံအမြောက်ဆံတို့သည် မိုးသီးမိုးပေါက်ပမာ တသဲသဲ ကျနေပြီးလျှင် တသောသော ညံနေတော့သည်။ မြင်းတပ်သားတို့ကား မိမိတို့၏ အသက်ကို ပဓာနမထား မရပ်မနား ဒလကြမ်း ချီတက်၍ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ခိုက်ကြလေသည်။
ယင်းသို့ သေမင်းခံတွင်း အတွင်းသို့ ဒလကြမ်းချီတက်၍ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသဖြင့် ရုရှအမြောက်တပ်ကိုမူ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့၏။ သို့သော် တပ်သား ၆၀၀ ကျော်အနက် ၁၉၅ယောက်မျှသာ မိမိတို့တပ်သို့ အရောက်ပြန်လာနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အကျအဆုံးကား များပြားလှ၍ ဒဏ်ရာရသူများလည်း ချီတက်ရာလမ်းကြောင်းတလျှောက် မြင်မကောင်းအောင် အတုံးအရုန်း ဖြစ်နေခဲ့လေသည်။ စစ်မိန့်ကို မှားမှန်းသိလျှက်နှင့် ဦးလည်မသုံ၊ စစ်သားကောင်းပီသစွာ အသေခံ၍ ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပုံကို အင်္ဂလိပ် ကဗျာစာဆိုတော်ကြီး လော့တင်နီဆန်က "မြင်းတပ်မဟာ ဖိတိုက်ခြင်း" အမည်ရှိ ကဗျာဖြင့် ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုကာ ထို မြင်းတပ်မဟာတပ်သားတို့၏ ဂုဏ်ရည်ကို ဥဒါန်းတွင် ရစ်စေခဲ့လေသည်။ ယင်းသို့ ကမ္ဘာတွသ် ဥဒါန်းတါင်ရစ်သောတိုက်ပွဲကလေးဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဘယ်လကလားဗာမြို့ကလေးမှာ ပင်လယ်နက်၏ ကရိုင်းမီးယား ကမ်းခြေပေါ်တွင် တည်ရှိသညဘ်။ ဆီဗတ်စတိုပိုမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၈မိုင်ခန့် ဝေးသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကလည်း ဤဒေသတွင် ရုရှားနှင့် ဂျာမန်တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။ ယခုအခခါ ဆိပ်ကမ်းမြို့ကလေးဖြစ်၍ တံငါလုပ်ငန်းနှင့် ဝိုင်အရက်လုပ်ငန်းများ ရှိသည်။ ဆိုဗီယက်အစိုးရလက်ထက်တွင် ဘယ်လကလားဗာမြို့ကို အခြားဆိပ်ကမ်းမြို့များကဲ့သို့ တိုးချဲ့ ပြုပြင်းခြင်း မရှိပေ။ အကြောင်းမူ ဘယ်လကလားဗာဆိပ်ကမ်းသည် မြင့်မားသော တောင်ကုန်းတောင်တန်းများ ဝန်ရံလျက် ရှိ၍ သင်္ဘောတစင်းမျှသာ ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိသောကြောင့်တည်း။ ထို့ကြောင်းစည်ကားခြင်းမရှိလှဘဲ လူဦးရေမှာ (၁၉၃၉ ခုနှစ်) ၁, ၃၀၀ ခန့်မျှသာ ရှိခဲ့လေသည်။ 
↑ Fletcher & Ishchenko: The Crimean War: A Clash of Empires, 159–160
↑ ၂.၀ ၂.၁ Kinglake: The Invasion of the Crimea, V, p. 350. These figures are taken from Kinglake. Sources vary slightly as to the number killed, wounded, or taken prisoner.
↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အပိုင်း၈၊
العربية: معركة بالاكلافا
azərbaycanca: Balaklava döyüşü
беларуская: Балаклаўская бітва
български: Битка при Балаклава
català: Batalla de Balaklava
čeština: Bitva u Balaklavy
dansk: Slaget ved Balaklava
Deutsch: Schlacht bei Balaklawa
English: Battle of Balaclava
Esperanto: Balaklava batalo
español: Batalla de Balaclava
suomi: Balaklavan taistelu
français: Bataille de Balaklava
galego: Batalla de Balaclava
magyar: Balaklavai csata
íslenska: Orrustan við Balaclava
italiano: Battaglia di Balaklava
한국어: 발라클라바 전투
Latina: Proelium Balaclavae
Nederlands: Slag bij Balaklava
polski: Bitwa pod Bałakławą
português: Batalha de Balaclava
română: Bătălia de la Balaclava
русский: Балаклавское сражение
srpskohrvatski / српскохрватски: Bitka kod Balaklave
Simple English: Battle of Balaclava
slovenčina: Bitka pri Balaklave
српски / srpski: Битка код Балаклаве
svenska: Slaget vid Balaklava
Türkçe: Balaklava Muharebesi
українська: Балаклавська битва
Tiếng Việt: Trận Balaclava